सुशान्तले गर्नु हुन्छ भने मैले किन हुदैन भन्दै एक बालकले गरे देहत्याग – Online Nepal
सुशान्तले गर्नु हुन्छ भने मैले किन हुदैन भन्दै एक बालकले गरे देहत्याग
June 17, 2020 207
एजेन्सी – बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुले आइतबार देहत्याग गरे । मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरमा उनले देहत्याग गरेका हुन् । उनको निधन भएको खबर पाएपछि पी डा सहन नसक्दा उनकी भाउजु सुधा देवीको पनि ज्या’न ग’यो ।
सुशान्तले अचानक यस्तो गरेको घटनाको पी डा सहन नसकी उनकी भाउजुले पनि प्राण त्याग गरेकी हुन। बिहारको पूर्णिया जिल्लामा रहेकी उनकी भाउजु सुधा देवी देवर सुशान्तको निधनको खबरले निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। ज्यान गु माउने सुधा सुशान्तको आफ्नै भाउजु भने होइनन् । ५ सन्तानमध्ये सुशान्त परिवारको एक्लो छोरा हुन् । सुधा देवी उनको काकाको छोराको श्रीमती भएको समाचारमा बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को दुखद खबर आएको छ ।
भारतिय मिडियाका अनुसार सुशान्तले आफ्नो ज्यान फा लेको खबरलले एक छात्रले पनि ज्या न फा लेका छन् । टिभीमा सुशान्तको निधनको खबर पाएपछि भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बरेलीमा एक दश कक्षामा पढ्ने छात्रले देहत्याग गरेका हुन ।
छात्रले देहत्याग गर्नु अघि लेखेका थिए – ‘अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतले देहत्याग गर्न सक्छन भने के म सक्दिन’ उक्त छात्रले नोटमा आफूमा तेश्रो लिङ्गीको जस्तो लक्षण भएको र साथीहरुले आफूलाई धेरै जिस्काउने गरेको बताएको भारतिय मिडियामा जनाइएको छ । अहिले पुलिसले उक्त घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।
के सुशान्त बलिउडमा परिवारवादको शिकार बनेका थिए ?
के सुशान्त बलिउडमा परिवारवादको शिकार बनेका थिए ? अर्थात् उनले देहत्याग गर्नुको पछाडि यही परिवारवादको संरचना धेरथोर जिम्मेवार थियो ? त्यसो त, बलिउडमा परिवारवाद अघोषित रुपमा स्थापित नै छ । यो विस्तारै पारिवारिक पेशा जस्तो पनि बन्न थालेको छ ।
योग्यता र क्षमता नभए पनि स्टार कलाकारका भाइ-भतिजा, छोरी-चेली भएकै कारण बलिउडमा प्रवेश गर्ने र स्थापित हुने मौका धेरैलाई मिल्यो । यसको ठीक उल्टो पाटो डरलाग्दो छ । कतिपय कलाकार अब्बल क्षमता र कौशल भए पनि परिवारवादको घेराभित्र पर्न नसक्दा छायामै परे ।
बलिउडकै स्थापित कलाकारहरुले सुशान्त सिंह राजपुतलाई त्यस्तैमध्येका एक अभिनेता ठानेका छन् । करण जोहर, आलिया भाट लगायत कलाकारले जब सुशान्तको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिए, त्यसपछि परिवारवादको बहस सतहमा उठेको हो ।
धेरैले सामाजिक सञ्जालमा करण र आलियालाई दोहोरो चरित्रको मान्छे भन्दै कठोर आलोचना गर्न थालेका छन् । यस्तो किन पनि भनियो भने, सुशान्तलाई करण जोहरको शो ‘कफी विथ करण’ मा आलियाले खिल्ली उडाएकी थिइन् ।
यतिसम्म कि, बाबु र आमाको प्रभावबाट बलिउडमा छिरेकी आलियाले सुशान्तलाई चिन्दिन समेत भनेकी थिइन् । जब कि, सुशान्त कठिन मेहनतबाट बलिउडमा स्थापित भएका थिए । उनै आलियाले सुशान्तको निधनबाट आफू स्तब्ध बनेको भन्दै गहिरो दुख व्यक्त गरेकी छन् । उनले यो दुख व्यक्त गर्ने शब्द नै नभएको भन्दै उनको परिवारमा समवेदना प्रकट गरिन् ।
बलिउडकर्मी गौरव मिश्राले आलियाको यस्तो ट्वीटलाई ‘फेक सिम्प्याथी’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । उनले त बलिउडकर्मीले ‘गोहीको आँशु’ झारेको भन्दै आलोचना समेत गरे । उनले भनेका छन्, ‘सुशान्तले भनेका थिए कि, कसैले पनि उनलाई पार्टीमा बोलाएका थिएनन् । उनले बलिउडले आफूलाई परिवारको सदस्यको रुपमा स्वीकार नगरेको बताएका थिए । उनी सधैँ यही कुराले दुखी र निराश थिए । बलिउड स्टप हिप्पोक्रेसी एन्ड घडियाली टियर्स‘ ।’
त्यसो त, सुशान्त अब्बल अभिनेता हुँदा हुँदै पनि धेरै ठाउँबाट उनलाई अघोषित रुपमा वहिष्कार नै गरिएको थियो । जस्तो कि, ‘काइ पो चे’ जस्तो सफल फिल्ममा उनले डेब्यू गर्दा नै आफुलाई पुष्टि गरिसकेका थिए । ‘पिके’, ‘केदारनाथ’ जस्ता फिल्ममा सुशान्तले सम्झनलायक काम गरे ।
कठिन मेहनतबाट बलिउडमा स्थापित बनेका सुशान्तले फिल्म अवार्ड पाउनुपर्ने गुनासो बलिउडमा सुनिरहन्थ्यो । यतिसम्म कि, कंगना रनोटले त ‘गल्ली ब्वाइ’भन्दा ‘काइ पो चे’ धेरै हिसाबले अवार्डका लागि योग्य फिल्म रहेको टिप्पणी गरेकी छन् ।
विडम्वना कस्तो भने, हरेक वर्ष सुशान्तको अभिनयको प्रशंसा त धेरै हुन्थ्यो । तर उनी फिल्म अवार्डमा नै बोलाइँदैनथे । यतिसम्म कि, प्रोड्युसरहरुको पार्टीमा समेत उनलाई बोलाइँदैनथ्यो ।यसको मतलब सुशान्त एक किसिमले उपेक्षित वा वहिस्कृत जस्तै थिए । त्यसो त, सुशान्त आफैँ पनि कतिपय सन्दर्भमा बलिउडले परिवारको सदस्यको रुपमा स्वीकार नगरेको गुनासो गर्ने गरेका थिए ।
Prevखुसीको खबर : कोरोना भाइरसबाट बच्ने औषधि भेटियो
Next‘आर्थिक संकटबाट जोगिन प्रदेशहरु खारेज गरौं, सय जनाको संसद र १० जनाको मात्रै मन्त्रिमण्डल बनाऔं’
मात्र एक कचौरा पानीले रातारात बदलिदिनसक्छ तपाईको भाग्य (हेर्नुहोस भिडियो)
जेठ २५ गतेवाट छोटो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न सुझाव, जोखिम रहेका क्षेत्रमा मात्र लकडाउन कडा, अरु ठाउँमा खुकुलो हुने !
भारतको पक्षमा खुलेर संसदमा बोल्दै आएकी सांसद गिरीको घर घेराउ, गेटको ताला पनि फोडियो
पुरुषले महिलाको कुनकुन अङ्गको ख्यालगर्छन महिलाले अवस्य हेर्नुहोस
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60550)
आफ्नो फोक्सो ७२ घण्टामा आफैं यसरी सफा गर्नुहोस्, पढौं र जानकारीको लागी सेयर गरौं… (50300)
सुष्माभन्दा खतरा उनकी भाउजु, खुल्यो नन्द भाउजुको सबै पोल! यसरी लकाए सत्य (हेर्नुहोस भिडियो) (44830)
जेठ ३ गते शनिबारदेखि यस्ता कडा नियमहरु लागु हुने, लकडाउनमा यस्तो कसैले नसोचेको नियम आयो हेर्नुहोस (43106)
नवराज-शुष्मा प्रकरण : नवराजकी प्रेमीका शुष्माले पहिलोपटक मुख खोलीन् (35933)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28880)
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित) (27414)
खुल्न थाले विद्यालय, यसरी पढाइँदैछ विद्यार्थी
कटरीनालाई छाडेर उनको बहीनी इजाबेलमा फि’दा भए सलमान खान, देख्नासाथ भने,‘अरे वाह……..’
प्रेमीको विबाह मण्डपमै गएर प्रेमीकाले काटिदिईन् बेहुलीको कपाल, सबैले हेर्दाहेर्दै फेविकलले टाँसिदिईन् आँखापनि
काठमाडौंमा आमा छोरि यस्तो अवस्थामा भेटिए (हेर्नुहोस भिडियो)